RASMI: Neymar JR Oo Ganaax Rasmi Ah Kula Kulmay Taageerihii Uu Feedhay & Tirada Kulamada Laga Ganaaxay | Laacib.net
RASMI: Neymar JR Oo Ganaax Rasmi Ah Kula Kulmay Taageerihii Uu Feedhay & Tirada Kulamada Laga Ganaaxay
May 10, 2019 Apdihaken Omer Adem 0
Xiddiga kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar JR ayaa la kulmay ganaaxa dhibaatadii uu dhawaan u geystay taageere kooxda Rennes ah oo uu gacanta kala hadlay isla markaana uu feedhay.
Xidhiidhka kubadda cagta France ee FFF ayaa Neymar si rasmi ah ugu soo rogay ganaax saddex kulan ah kaddib dhacdadaas foosha xun ee uu ka geystay markii kooxdiisu ay guuldarro kula kulantay Final-kii Coupe De France ee ay Rennes wajaheen.
PSG ayaa kulankaas 21-kii daqiiqo ee ugu horreeyay kusoo dhashatay laba gool oo ay ka heshay Dani Alves iyo Neymar balse Rennes ayaa kasoo kabatay ugu dambayna gool kulaadyo 5-6 ah ku qaaday koobka.
Dhacdadan uu Neymar ku geystay qabyta sarre ee garoonkii kulanku ka qabsoomayay ayaa ahayd mid ganaaxeedu gaadhi karayay ilaa siddeed kulan balse FFF ayaa ugu dambayn go’aansaday inay saddex kulan ku koobaan.
Ganaaxa Neymar ayaan kaliya ku koobnayn saddexdaas kulan ee tartamada gudaha dalka France ah balse waxa uu sidoo kale dhawaan UEFA kala kulmay ganaax tartamada Yurub ah (Champions League xilli ciyaareedka dambe).
UEFA ayaa isla saddex kulan ku ganaaxay 27 jirkan waxaana uu ku mutaystay hadaladii xanafta lahaa ee uu bartiisa Instagram kusoo daabacay kaddib kulankii ay Champions League kaga hadheen sababta Manchester United.
Neymar oo si weyn uga cadhaysan rigoorihii goorta dambe lagu abaalmariyay Red Devils ayaa sheegay in afarta garsoore ee kulanka masuulka ka ahaa ay ahaayeen kuwo aan kubadda waxba ka garanayn.